2021 နွေဦးရာသီမြင်ကွင်းများ (၁၂၀) – Federal Journal
2021 နွေဦးရာသီမြင်ကွင်းများ (၁၂၀)
(နွေဦးတော်လှန်ရေးဟာ မှတ်တမ်းတစ်ခုကို သယ်ဆောင်ပြီး တာဝေးခရီးပြေးနေရဲ့)
ချက်ဒ် (Czech Republic) နိုင်ငံက မြန်မာ့အရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုက ပြုစုထားတဲ့ စာရင်းဇယားပါ။
ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်သော ချက်ဒ်(Czech Republic) နိုင်ငံမှ.မြန်မာ့ အရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်လျက် ရှိအဖွဲ့ တစ်ခုမှ ပြုစု ထားသော စာရင်းအရ..ယခုနှစ်(2021) ဖေဖော်ဝါရီလ မှ နိုဝင်ဘာလအတွင်း အာဏာသိမ်းစစ်တပ်(Myanmar Tamataw) နှင့် တိုင်းရင်းသားတပ်မတော်(EAO)များနှင့် ဒေသဆိုင်ရာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်(PDF)များအကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲများအတွင်း မြန်မာ့စစ်တပ်ဖက်မှ သေဆုံးခဲ့သူ စုစုပေါင်း 3959ဦးနှင့် ဒဏ်ရာရသူ 1185 ဦးရှိခဲ့ ပေသည်။ ဤပမာဏသည် 2020ခုနှစ်က နာဂေါ်နို-ကာရာဘက်ချ်(Nagorno-karabakh)ဒေသတွင်ဖြစ်ခဲ့သော အာမေးနီးယမ်း(Armenian)နှင့် အဇာဘိုင်ဂျန်(Azerbaijain) နှစ်နိုင်ငံအကြားဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်ပွဲအတွင်း.တစ်ဖက်စီမှ ကျဆုံးခဲ့သော စစ်သားအရေအတွက်ထက် များပြားနေပေသည်။ ထိုစစ်ပွဲအတွင်း အာမေးနီယမ်းစစ်တပ်မှ 3788 ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး အဇာဘိုင်ဂျန်စစ်တပ်ဖက်မှ 2879ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ နှစ်ဖက် တပ်များသည် နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မှီလက်နက်များ တင့်ကားများ တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုံးများကို များပြားစွာအသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။ ယခုမြန်မာ့တပ်မတော်အားခုခံတိုက်ခိုက်နေသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်များ(EAO)နှင့် PDFတပ်များတွင် PDFများသည် ပြည်သူများသာဖြစ်သည်အတွက် လက်လုပ်မိုင်းများ တူမီးသေနတ်ကဲ့သို့လုပ်သေနတ်များဖြင့်သာခုခံတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်. ထိုအထဲတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း မကွေးတိုင်းနှင့်ချင်း ပြည်နယ်မှ PDF များ ၏လက်ချက်ကြောင့် မြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှ သေဆုံးသူမှာ 2146 ဦးအထိ ရှိခဲ့ပါသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း PDFများကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ဖက်မှ 1307ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမကွေးတိုင်း PDFများကြောင့် 448ဦး ချင်းပြည်နယ် PDFများကြောင့် 391 ဦး အသီးသီးသေဆုံးခဲ့ကြပါသည်။ယခင်က ထို အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်နယ်မြေများဖြစ်သည့် ယော ဆော ဂန့်ဂေါ ချင်း ဒေသများသည် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ မရှိဘဲ အေးချမ်းသာယာပြီး ဒေသခံပြည်သူများသည်လည်း ရိုးသား ဖြူစင်ကြသူများသာဖြစ်ကြပါသည်။ ယခုအခါ မြန်မာစစ်တပ်သည်။ ထိုဒေသများအားအပြင်းအထန် လေကြောင်း ရေကြောင်း လက်နက်ကြီးပစ်ကူများဖြင့်(အင်အားမမျှတစွာ)အသုံးပြု စစ်ဆင်နေသော်လည်း အောင်မြင်မှု့မရရှိသေးပါ။ ထိုဒေသများတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းသည်လူဦးရေ 5.6သန်း မကွေးတိုင်းသည် 4သန်းနီးပါးနှင့် ချင်းပြည်နယ်သည် လူဦးရေ5သိန်း ခန့်သာရှိကြောင်း 2020 apr 1stရက်နေ့ လူဦးရေစစ်တန်းအရသိရှိရပါသဖြင့်..ချင်း တို့၏သတ္တိ ကိုခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။ မြန်မာကို ကမ္ဘာက စောင့်ကြည့်နေသည်ကို သတိပြုကြပါ။ Igor blazevic(Czech Republic).
နှစ်ဘက် အကျအဆုံးစာရင်းတွေကို မဖေါ်ပြမိဖို့ တတ်နိုင်သမျှ ကျွန်တော်ရှောင်ပါတယ်။ အတည်ပြုရ ခက်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတရံ သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ပီဒီအက်ဖ်အဖွဲ့တွေ ဆီက တင်လာတဲ့ သတင်းကိုတော့ ယူသုံးဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း ဒီအရေးကိစ္စကို သီးသန့်လေ့လာနေတဲ့ ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ ကိန်းဂဏန်းလေ့လာမှုတွေအဖြစ် ဒီမှာ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကိန်းဂဏန်း အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပေမယ့် လုံးလုံးကြီးလွဲမယ်လို့တော့ ကျွန်တော် မမြင်ပါ။ ဒီလေ့လာချက်စာရင်း ဇယားတွေထဲမှာကို စကစ ရဲ့ ဆယ်လအတွင်း အလဲအကွဲကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ချင်းမှာ၊ ကချင်မှာ၊ ကရင်မှာ အသိမ်းခံထားရတဲ့ ပို့စ်တွေ / မြို့ငယ်တွေ တစ်ခုမှပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါ။
ကယားမှာ ရဲဘော်တွေကျသွားခဲ့ရင် ဈာပနကို အများသူငါသုံးနေတဲ့ မြို့ရဲ့ သုဿန်မှာပဲ၊ ကားတွေနဲ့ သွားလာပြီး တခမ်းတနား သဂြိုလ်ကြတာ၊ မြို့မီးသတ်စခန်းလိုနေရာမျိုူးမှာ အထိုင်ကင်းချထားတာကို ကြည့်ရင် ကယားမှာ PDF တွေရဲ့ နယ်မြေစိုးမိုးထားနိုင်မှုကိုတွေ့ရပါမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းက ရွာတစ်ချို့မှာ စစ်ပွဲသွားဖို့ တော်လှန်ရေးသမားတွေကို သပြေပန်းတွေ ကမ်းနေတဲ့ ပြည်သူတွေကို တွေ့ရသလို ရွာလယ်လမ်းအတိုင်းချီလာတဲ့ စစ်ပွဲပြန်တွေကို လက်ခုပ် လက်ဝါးတီးကြိုနေတာမြင်တော့ အုပ်ချုပ်ရေးဟာ ဘယ်သူ့လက်ထဲမှာလဲ မေးခွန်းတွေ ထွက်လာပါတယ်။
MNDAA ရှိရာ ပန်ဆိုင်း၊ မုံးကိုးတစ်ဝိုက်ကို အင်အားအပြည့်နဲ့ (တစ်ခါတရံလေယာဉ်ပါသုံးပြီး) ထိုးစစ်ဆင်နေတာ တစ်လကျော်ပါပြီ။ MNDAA က သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူ တပ်ခွဲစခန်းသုံးခု ဆုတ်ပေးလိုက်တာကလွဲပြီး၊ ဘာတစ်ခုမှ မိမိရရ မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။ စကစ လက်နက်တွေဆုံးရှုံးတာ၊ ကျဆုံးစစ်သည်တွေပြန့်ကျဲကျန်ခဲ့တာပဲ သတင်းတွေဖတ်ရပါတယ်။
တစ်နေ့ကလည်း တစ်ရက်တည်းတိုက်ပွဲ ၆ကြိမ်ဖြစ်ပြီး လက်နက်ကြီးကျည် ထောင်ချီပစ်တက်ထိုး လည်း လန်ကျသွားကြောင်း ကိုးကန့်သတင်းဌာနက တင်ထားတာဖတ်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီဘက် စစ်မျက်နှာမှာလည်း အသာမရသေးဘူးဆိုတဲ့သက်သေပါ။ ဒီနေရာအတွက် စကခ ၅ခုနဲ့ တပ်မ ၃ခုထိုင်ပြီး၊ တမ်မ၇၇ကို ပန်ဆိုင်းမှာ အထိုင်ချလို့၊ သံချပ်ကာကားတွေပါသုံး တိုက်နေတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တိုက်တိုင်းမအောင်တာကို သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း သိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကလေးမြို့မှာလည်း အမှတ် ၆၄၄ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတပ်ရင်းထဲထိ ထိုးဖေါက်ဝင်တိုက်တာ ခံနေရပြန်တဲ့ သတင်းလည်း ဖတ်ရပါတယ်။
တပ်တွေကို စီမံခန့်ခွဲရာမှာလည်း တိုင်ပတ်နေပုံရတယ်။
ရေစကြို အလယ်ကျွန်းက တိုက်ပွဲမှာ ဖမ်းမိတဲ့သုံးပမ်းရဲ့ ယူနီဖေါင်းဟာ ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်ဖြစ်နေတယ်။ မြင်းခြံကို ရန်ကုန်တိုင်းက တပ်ပို့တာ သာမာန်အချိန်မှာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်မှမဟုတ်တာ။ မြောက်ပိုင်းနယ်မြေထဲ ကမ်းရိုးတန်းတပ်တွေရောက်နေတာ၊ ရန်ကုန်မြို့လုံခြုံရေးမှာ ထောက်ပို့တပ်တွေသုံးနေရတာ၊ လားရှိုးမန်း လမ်းပေါ်မှာ အင်ဂျင်နီယာတပ်တွေ ကင်းယူနေတာမြင်ရတာ သိပ်တော့ ဟန်မကျဘူး။
အခုလည်း ရခိုင်က တပ်မ ၄၄နဲ့ ၅၅ကိုပြန်ခေါ် (လမ်းမှာ တစ်စီးကားမှောက်/သေ/ဒဏ်ရာ) ဆောဘက်က တပ်တွေကို ပေါက်ကိုပြန်ရွှေ့၊ လမ်းမှာ အသိပ်ခံရ အပိတ်ခံရလို့ လေယဉ်နဲ့ပစ်ကူ ဝင်ကယ်ရ။
အထာမကျ၊ ဂဏန်းမငြိမ်တဲ့ တပ်အရွေ့တွေကို မြင်ရတာ ပျော်လားလို့ မေးရတော့မယ်။
စစ်မျက်နှာတွေများလာလေလေ၊ ဖြန့်စရာ တပ်လက်ကျန်မရှိလေလေ။ ပျူစောထီးကူရ BGF ရေကယ်ပါဟ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေ ပြန်လာကြ၊ ပြည်သူ့စစ်တွေပြင်ဆင်ဟ ဖြစ်ကုန်ကြတာ မြင်နေရပါကြောင်း။
နွေဦးဟာ မှတ်တမ်းတစ်ခုကို သယ်ဆောင်ပြီး တာဝေးခရီးပြေးနေရဲ့။